ढुवानीमा सरकारी निगरानी : प्रभावकारी बन्दै भीसीटीएस प्रणाली
निजीक्षेत्र भन्छ : कुनै गुनासो छैन, हामी खुसी छौं
सरकारले मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमनका लागि लागु गरेको भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) प्रभावकारी बन्दै गएको छ। सुरुमा भीसीटीएस कार्यान्वयन केही सुस्त देखिएको थियो। तर अहिले यसको प्रभावकारिता बढ्दै गएको राजश्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ।
शुरुमा केही अलमल देखिए पनि पछिल्ला दिनमा बिल तथा कारोबार विवरण प्रविष्टि गर्ने क्रम बढ्दै गएको विभागका सूचना अधिकारी भविश्वर पाण्डेले बताए।
सरकारले व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु तथा ढुवानीका साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) को सफ्टवेयर तयार गरी २०७६ साउन १ गतेबाट लागू गरेको थियो। गत भदौसम्ममा दैनिक १८ हजारले विवरण भीसीटीएस प्रणालीमा प्रविष्टि गर्दै आएका थिए। अहिले बढेर २१ हजारको हाराहारीमा पुगेको विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार यो प्रणाली कार्यान्वयनको १८ महिनामा १ करोड २२ लाख ५० हजारभन्दा बढी बिल दर्ता भएका छन्। त्यस्तो संख्या गत असारमा ७३ लाख मात्रै थियो।
पछिल्ला दिन व्यावसायिक फर्म तथा प्रतिष्ठानले आफूले कारोबार गरी सामान ओसारपसार गर्दाको विवरण प्रविष्टि गर्ने क्रम उल्लेखनीय रुपमा बढेको राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्।
यो प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि १८ महिनाको अवधिमा करीब ६ सय सवारीसाधन र फर्मको अनुगमन विभाग मातहतका कार्यालयले गरेका छन्। प्रणालीको बेवास्ता गर्ने फर्म र व्यवसायीबाट ३ करोड ५० लाखभन्दा बढी जरिवाना उठाइएको छ।
विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार पहिलोपटक ५० हजारसम्म, त्यसपछि पटकैपिच्छे १ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। त्यहीअनुसार अटेरी गर्नेहरूमाथि कारबाही भइरहेको छ।
उनले अवैध आर्थिक कारोबारलाई अन्त्य गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यो प्रणाली उपयुक्त बन्दै गएको दाबी गरेका छन्। ‘भीसीटीएसले आर्थिक सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्नुका साथै व्यवसायीको पनि समय र लागत बचत गराएको छ,’ उनले भने, ‘कर छली, चोरीपैठरी नियन्त्रणदेखि करको दायरा बढाउनसमेत भीसीटीएसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।’
मैनालीका अनुसार यो व्यवस्थापछि मालवाहक गाडी पटके चेकजाँचका नाममा रोकिनु पर्ने बाध्यता हटेको छ। राजमार्गमा चेकपोस्ट राख्नुपर्ने अवस्थासमेत हट्दै गएको विभागको भनाइ छ।
के छ उपयोगिता?
भीसीटीएस प्रयोगबाट व्यवसायको समय र लागत बचत हुने विभागका अधिकारी बताउँछन्। यसले डुइङ बिजनेसमा लागत घटाउन सहयोग पुर्‍याउने उनीहरुको भनाइ छ। यसले राजस्व अनुसन्धान चेकपोस्टलाई यसले विस्थापित गर्नेछ।
चेकपोस्ट नहुँदा बिलबिजकको प्रति बुझाउने झन्झट पनि अन्त्य हुने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्। यसअघि कार्यालय बिदा तथा विभिन्न भौतिक अवरोधमा सामान ओसारपसारमा समस्या आउने गथ्र्यो। तर यसको प्रयोगले बिना रोकटोक ढुवानी गर्न सजिलो भएको छ।
निजी क्षेत्र खुसी
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले पनि भीसीटीएस प्रणाली कार्यान्वयनपछि स्वच्छ रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनेको बताएका छन्। उनका अनुसार शुरुमा सरकारले यो प्रणालीबारे निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट पार्न नसके पनि पछिल्ला दिनमा यो प्रणाली अतिउपयोगी रहेको महसुस व्यवसायीहरुले गरेका छन्।
‘निजीक्षेत्र खुशी छ, यो प्रणालीबारे कुनै उद्योगी-व्यवसायीबाट समस्या परेको गुनासाहरू आएका छैनन्’, उनले भने, ‘यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन हामीले के गर्नुपर्ने हो ? सरकारलाई मद्दत गर्नेछौं।’
के हो भीसीटीएस ?
एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मालसामान ओसारपसार गर्नुपूर्व ढुवानीको विवरण इन्टरनेट वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरेर मात्रै ओसारपसार गर्नुपर्ने प्रणाली नै भीसीटीएस हो।
कारोबारको पारदर्शिता र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको संक्षिप्त विवरण प्रविष्टि गरेर मात्र मालसामान ओसारपसार गरिन्छ। यसमा व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु आयात र निर्यातकर्ता, उद्योग, भन्सार एजेन्ट, ढुवानी कम्पनी र वितरक तथा थोक बिक्रेताले विवरण भर्नुपर्छ।
कसरी प्रयोग हुन्छ ?
यो प्रणालीमा प्रवेश गर्दा प्रयोगकर्ताले आफैँले यूजर आइडी र पासवर्ड बनाउन सक्छन्। राजश्व अनुसन्धान विभागको वेबसाइटमा लग इन गरी प्राप्त निर्देशानुसार मालवस्तु र ढुवानी साधनको संक्षिप्त विवरण प्रविष्ट गरिन्छ।
मालसामान गन्तव्यमा पुगेपछि चालक र प्रयोगकर्ताले पुगेको जनाऊ दिन सक्छन्। विभागको वेबसाइटमा गएर उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो ढुवानी गर्ने वस्तु र साधनको संक्षिप्त विवरण सो प्रणालीमा प्रविष्ट गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
पछिल्लो ६ महिनामा भीसीटीएस प्रणाली कार्यान्वयन अवस्था
२०७७ असार मसान्तसम्म
२०७७ पुस मसान्तसम्म
कारोबार (रकम लाखमा)
स्रोत : राजश्व अनुसन्धान विभाग
प्रकाशित मिति : फागुन ६, २०७७ बिहीबार १४:५८:५९, अन्तिम अपडेट : फागुन ६, २०७७ बिहीबार १५:०:२४